KANDIDA ANDRY RAJOELINA ANY FRANTSA : Nitsidika manokana ny “Musée du Quai Branly”
Taorian’ny fihaonana mivantana sy tafatafa niarahan’ny filoha mpanorina ny Iem, Andry Rajoelina tamin’ireo Malagasy mila ravinahitra ao Parisy-Frantsa dia niroso tamin’ny fitsidihana ny « Musée de Quai Branly » any an-toerana indray ny tenany afak’omaly. 19 septembre 2018
Nifanindra an-dalana tamin’ny fahatongavan’ity kandidà hifaninana hofidiana ho filoham-pirenena tany Frantsa ity ny fisokafan’ny fampirantiana an’i Madagasikara ao amin’ity tahirim-bakoka ity ka anisany tonga nanome voninahitra izany ny tenany. Ireo kolontsaina tena mampiavaka sy manasongadina an’i Madagasikara no naranty tao amin’ity Mozea isany manan-tantara ao Parisy ity.
Tafiditra ao anatin’izany ny tantara, ny fomba, ny asa tanana Zafimaniry, ny zava-maneno, ny fitafy sy ny taovolo, ny lamba malagasy, ny moara ary ny Aloalo any atsimo izany fampirantiana izany. Manampy izany koa ny fampirantiana sary ataon’i Pierrot Men, miaraka amin’ny antontan-kevitra momba ny famadihana sy ny fomba amam-panao malagasy. « Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ireo mozea iraisam-pirenena sy ireo olon-tsotra nitahiry sy nanangona manokana izany no nahafahana nanao izao fampirantiana izao », hoy ny mpikarakara ny hetsika.
Ity no fantatra fa hetsika fampahafantarana voalohany nisy tao an-toerana hatramin’ny taona 1946 no nankaty. Karazan-javatra miisa hatrany amin’ny 350 maneho ny kolontsaina Malagasy no tena misongadina amin’izany. Tsiahivina fa ny talata 18 septambra lasa teo no nanombohan’ny hetsika ary tsy hifarana raha tsy ny 1 janoary 2019. Ankoatra ireo olona voasokajy tonga mitsidika izany dia heverina hampitombo ireo mpizaha tany tonga ao Parisy ity fampirantiana vakoka lehibe ao amin’ny “Musée du Quai Branly” ity.